बिधार्थी बर्गका लागि खुसीको खबर अल लामो लामो बाक्य अनि अंकलाई यसरी सजिलै सँग कन्ठ गर्नुहोस ... - Sudur Khabar
बिधार्थी बर्गका लागि खुसीको खबर अल लामो लामो बाक्य अनि अंकलाई यसरी सजिलै सँग कन्ठ गर्नुहोस …
४.३२८१५२८०१००१३८४३० गर्नु भयो ? कतिवटाजति याद भयो ? याद गर्न पक्कै गाह्रो भयो ? के याद भएका नम्बरहरू क्रमबद्ध रूपमा छन् ? आउनुहोस् सिकौँ, यसलाई याद गर्ने सजिलो तरिका : अंक शब्दजस्तो हुँदैन । किनकि शब्दको चित्र बनाउन सजिलो हुन्छ, तर अंक वा नम्बरको चित्र बनाउन कठिन हुन्छ । अब तपाईंहरू जे सिक्दै हुनुहुन्छ, यो सबैभन्दा सजिलो विधि हो । त्यसो त विभिन्न अंक तथा मोबाइल नम्बरहरू स्मरण गर्ने अरू आधुनिक तरिकाहरू हुन्छन् । तर, आज सुरुवाती विधितिर जाऊँ ।
अब घाँटीतिर जाऔँ । घाँटीमा कंकालको दाँतले (३२) टोक्छ र एक्कासि (८१) टोक्छ, तपाईंले थाहै नपाई । कल्पना गर्नुस्, यसलाई जति सक्दो रोचक बनाउनुहोस् । यो कल्पनामा तपाईंको सबै इन्द्रियको प्रयोग गर्नुहोस् । दाँतबाट ३२ नम्बर याद आउँछ र एक्कासि टोकेको कल्पना गरेको कारणले ८१ नम्बर याद आउँछ । अब हाततिर जाऊँ । तपाईंको हात एउटा बाहुन (५२) ले समातेर रस्सीले (असी, ८०) बाँधिदिन्छ । जुन नम्बरको सजिलै कुनै चित्र आउँदैन । त्यसलाई ट्रिक प्रयोग गरेर अरू कुनै वस्तुसँग गाँस्नुपर्ने हुन्छ, रस्सीबाट अस्सी याद गरेजस्तो । अब जाऊँ छातीतिर । यहाँ तपाईंले १०० र १३ नम्बरको कहानी बनाउनु छ । यसो गर्नुहोस्, १०० का लागि एउटा १०० को रिचार्ज कार्ड कल्पना गर्नुहोस्, अनि १३ का लागि तीर । तपाईं आफ्नो छातीमा १०० को रिचार्ज कार्ड स्क्र्याच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । नभएपछि तपाईं त्यो कार्डलाई तीरले स्क्र्याच गर्नुहुन्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।